Fahotana - Wikipedia
Ny fahotana dia fandikana an-tsitrapo na tsy an-tsitrapo ny didin' Andriamanitra ka heloka eo anatrehan' Andriamanitra izany. Ny fahotana dia mety ho ny tsy fanoavana na ny fandavana na ny fisakanana ny famonjena, na mety ho ny antony itrangan' ny fahafatesanan' ny fanahy. Mety hiseho amin' ny alalan' ny asa azo tsapain-tanana ny fahotana na koa amin' ny alalan' ny eritreritra manimba ny fifandraisan' ny olombelona amin' Andriamanitra.
Fahotana ny zavatra rehetra misakana ny fahatratrarana ny tanjona tsara tokony ho tratra araka ny fampianaran' ny fivavahana iray (mety ho ny famonjena izany tanjona izany na zavatra hafa). Tsy fahotana ny fandikana ny lalàna nataon' olombelona.
Ny olona tsy mino an' Andriamanitra dia tsy mino koa ny fisian' ny fahotana nefa tsy amin' ny fivavahana rehetra no ahitana ny atao hoe fahotana fa amin' ny sasantsasany ihany. Ny tontolon' ny finoana jiosy sy kristiana ary silamo no tena iresahana betsaka ny amin' ny fahotana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahotana&oldid=1010394"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 08:51
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 08:51 ity pejy ity.